Homeसमाचारके चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा गहिरो प्रे’ममा छन् ? (भिडियो सहित )
April 13, 2021 admin समाचार 5827
नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । संचार’कर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागि आफूहरु एकसाथ रहेको ब’ताएका छन् ।
दर्शकले त तपाइ’हरुको जोडीलाई धेरै मन पराए अनि वास्तविक जीवनमै हेर्न चाहेका छ्न नी भन्ने संचारक’र्मीको प्रश्नमा पूजाले भनिन्– यो दर्शकको चाहना हो । यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौ । हामी, दर्शकको मा’याकै कारण एकसाथ काम गरिरहेका छौ । भोलीको कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र ?
नायिका पू’जा शर्माले भनिन हामी राम्रो साथी होउ तर आफूहरु बिहेको सोचमा भने आइनसकेको बताइन् । चलचित्र ‘रा’मकहानी’मा एकसाथ काम गरेपछि पूजा र आका’श नजिक भएका थिए । दर्शक यो जोडी वस्तविक जिव’नकै जोडी होस भन्ने चाहन्छन ।
यता दाङको तुलसी’पुरमा जन्मिएका नेपाली चलचित्रका नायक आकाश श्रेष्ठ कार्तिक १९ गते आफ्नो जन्मदिन मनाइर’हेका थिए । नेपाली चलचित्र ‘म त तिम्रै हुँ’बाट रंगिन दुनियाँमा प्रवेश गरेका आकाशको करिअ&रको दौड भने चलचित्र ‘रामकहानी’मा काम गरेपछि सुरु भएको थियो । नायिका पूजा शर्मासँग जोडिएपछि आका’शको करिअर परिवर्तन भयो । आज आका’शको हातमा चलचित्र र म्यूजिक भिडियोको कुनै अभाव छैन ।
जन्मदिनको अव’सरमा कुरा गर्दै नायक श्रेष्ठ आफूले भनेका थिए अझै करिअरमा धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ । उनले फ्यानले दिएको अथा’हा प्रेमको बारेमा भने–‘मैले करिअरमा यो उपलब्धी पाउँछु भनेर सोचेको थिइनँ । जुन तरिकाले फ्यानले मलाई माया दिनु’भएको छ, कहिलेकाही यो कुराले म आफै आश्च_र्यमा पर्छु ।’
नायि’का पूजा शर्मासँग सहकार्य भएपछि आफ्नो करिअर बदलिएको आकाशले स्विकार गर्छन् । आकाश भन्छ’न्–‘हाम्रो टिमअपलाई दर्शकले मन पराउनुभएको हो । सायद, हामीले एक्लै काम गरेको भए यो खा’लको माया नपाउन पनि सक्थ्यौ । यसैले, यो टिमवर्क हो ।’ उनको प्रतिक्रिया सुन्दापनि उनीहरु नजिक छन् । सायद परिस्थितीले नै भएपनि आकाश र पूजाको जोडी रियल’मा नै फ्यानहरु हेर्न चाहान्छन् । इताजा खबरबाट
भाइरल चियावाली म्युजिक भिडियोमा, अभिनय देखेर कलाकार र दर्शक छक्क (भिडियो सहित)
March 28, 2021 admin समाचार 5214
सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल भएकी एक संघर्षशिल महिला अब म्युजिक भिडियोमा पनि दे’खिने भएकी छन् । सानो सन्तानलाई पिठ्युमा बोकेर विहानै ३ वजे देखि काममा ख’टिएकी महिलाका बारेमा युट्युववमा भिडियो सार्व’जनिक भएपछि उनी भाइरल भएकी थिइन्
October 17, 2021 admin समाचार 5076
January 28, 2021 admin समाचार 7352
गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको विवा’हको चर्चा खासै भएको थिएन । उनको प्रेमको भने एक पट’क चर्चा भएको थियो । उनले प्रेमिकाको जन्मदिनमा निकै भावुक भा’वना ब्यक्त गरेर शुभकामना दिएका थिए । त्यती बेला नै